Maxaad ka taqaan kooxaha kubada cagta ee dunida qaalisan qiime ahaan? (Warbixin) – SBC
Maxaad ka taqaan kooxaha kubada cagta ee dunida qaalisan qiime ahaan? (Warbixin)
Posted by editor on Apriil 19, 2012 Comments
Kooxda Manchester United ee ka dhisan wadanka Ingiriiska ayaa laga loodin la’yahay sanadkii 8-aad oo xiriir ah naadiga ugu qaalisan dunida sida uu soo bandigay wargeyska Forbes.
Daraasad Wargeyskaasi uu soo daabacay ayaa lagu cadeeyey in kooxda Man United oo xiligan haysata horyaalka Premier League ay ku qiimeysan tahay marka laga hadlayo qiimaha ay joogto aduun lacageed oo gaaraya $ 2.24 bilyan oo doolar.
Waxyaabaha ka dhigay qiimaha qaaliga ah kooxda Manchester United ayaa waxaa ka mid ah qiimeynta lagu sameeyey dadka taageersan ee dunida dacaladeeda ku kala firirsan oo lagu qadaray tiradoodu 330 milyan oo qof.
Dhanka kooxaha kubada cagta ee dunida ugu qaalisan kooxda Real Madrid ee reer Spain ayaa kaalinta labaad waxay ka gashay oo ay noqotey naadiga labaad ee dunida ugu qaalisan iyadoo qiimaha ay xiligan suuqa ka joogto kooxdaasi lagu sheegay $ 1.877 bilyan oo doolar.
Naadiga Barcelona ee dalka Spain xiliganna ah horyaalka qaarada Yurub ayaa kaalinta sadexaad ka noqdey kooxaha kubada cagta ee dunida ugu qaalisan iyadoo qiimaha ay joogto xiligan lagu qiimeeyey $ 1.307 bilyan oo doolar.
Kooxda Arsenal ee waqooyiga magaalada London ee caasimada Ingiriiska ka dhisan ayaa noqotey kooxda afaraad ee dunida ugu qaalisan iyadoo lagu qiimeeyey Arsenal aduun lacageed oo gaaraya 1.292 bilyan oo doolar.
Kaalinta shanaad kooxaha kubada cagta ee dunida ugu qaalisan waxaa ka gashay kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka oo lagu qiimeeyey $ 1.235 milyan oo doolar.
Kooxda ku jirta kaalinta lixaad kooxaha ugu qaalisan dunida waxaa noqotey AC Milan ee dalka Talyaaniga kooxdan qiime ahaan waxay joogtan xiligan $ 989 milyan oo doolar.
Kooxda Chelsea ee dalka Ingiriiska ka dhisan ee uu leeyahay maalqabeenka Ruushka u dhahsay ee lagu magacaabo Roman Abramovich qiimaha ay joogto xiligan waxay noqotey kooxda 7-aad ee dunida ugu qaalinsa waxaa lagu qiimeeyey $ 761 milyan oo doolar.
Liverpool oo ka dhisan England waxay noqotey kooxda 8-aad ee dunida ugu qaalisan iyadoo lagu qiimeyntan lagu qiimeeyey $ 619 milyan oo doolar.
Kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga waxay liiskan qiimeynta kooxaha aduunka ugu qaalisan ka gashay kaalinta 9-aad waxay joogta qiime gaaraya $ 591 milyan oo doolar.
Kooxda Schalke04 ee dalka Jarmalka laga leeyahay waxay liiska qiimeynta kooxaha ka gashay kaalinta 10-aad waxaana lagu qiimeeyey.
11: Tottenham Hotspur (England) qiimaha ay joogto $ 564 milyan oo doolar.
12: Inter Milan (Italy) qiimaha ay joogto $ 490 milyan oo doolar.
13-Manchester City oo England ka dhisan oo lagu qiimeeyey $443 milyan oo doolar.
14: Borussia Dortmund (Germany) oo lagu qiimeeyey $394 milyan oo doolar.
15: Olymic Lyon (France ) oo lagu qiimeeyey $ 385 milyan oo doolar.
16: Hamburg SV (Germany) oo lagu qiimeeyey $ 355 milyan oo doolar.
17: AS Roma (Italy) oo lagu qiimeeyey $ 354 milyan oo doolar.
18: Olypic Marseille (France) oo lagu qiimeeyey 349 milyan oo doolar)
19: Valencia (Spain) oo lagu qiimeeyey $288 milyan oo doolar)
20: Napoli (Italy) oo lagu qiimeeyey $283 milyan oo doolar.
Apriil 30, 2012 at 12:00 am
we are alwayz on top viva MANUTD
Apriil 30, 2012 at 12:04 am
Juun 3, 2012 at 7:56 am
Wax horey ushaqey sateywaye malagugarikaro wayo ingland wakooxda ugu koobabka badan man united five by
Musa Uganda says:
Aktoober 18, 2012 at 1:19 pm
Man united is the best team in the world and it will be always
C/raxiin xeyle kuukaay says:
Noofember 21, 2013 at 10:15 am
Kooxda barcelona ayaa noqon doonta kooxda dunida ugu qaalisan sanad yada soo socda taasi waa rajadeyda